Ciidanka Badbaado Qaraan oo dib ugu soo laabanaya Caasimadda | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidanka Badbaado Qaraan oo dib ugu soo laabanaya Caasimadda
Xasaradda Siyaasadeed, ee uu abuuray Taliyihii hore ee Hay'adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin, isla-markaana uu sii huriyay Madaxweynihii hore Farmaajo, ayaa sababi karta in maalmaha soo socda ay caasimadda dib ugu soo laabtaan ciidamadii Badbbaadada Qaranka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay sheegayaan xogo hoose oo soo gaaray xaafiiska warqabadka Keydmedia Online, abaabul ciidan ayaa laga dareemayaa gobollada Shabeellooyinka iyo Waqooyiga Muqdisho, si heegan loo galiyo Ciidamada Badbaado Qaran, oo si weyn kaga soo hor jeeda tallaabooyinka siyaasadeed ee uu qaaday Madaxweynihii hore Farmaajo si uu u difaaco Agaasimihii hore ee NISA, eedeysane Fahad Yaasiin.
Qorshaha dib loogu abaabulayo Badbaado Qaran ayaa xalay si weyn looga dareemay degaanno ay ka mid yihiin Ceel-macaan, oo dhanka bari qiyaastii 35Km ka xiga magaalada Muqdisho iyo qeyb ka mid ah xaafadaha degmada Deyniille ee gobolka Banaadir.
Hoggaanka ciidamadan, ayaa sheegay in Farmaajo ka baxay heshiiskii uu amniga dalka ugu wareejiyay Ra’iisul Wasaare Rooble, isla-markaana uu dadka iyo dalka oo dhan uu halis u galinayo si uu u badbaadiyo Fahad Yaasiin oo ay dul hoganayaan eedo badan.
Badbaado Qaran, oo intooda badan ka tirsan ciidanka Xoogga dalka, ayaa lagu xasuustaa in ay dalka ka badbaadiyeen inuu ku dhaco gacan kali-talis, kadib markii Farmaajo uu labo sono oo sharci-darro ah ku darsaday muddadiisii xil-heynta bishii April.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa dhawaan amar ku siiyay Fahad Yaasiin, inuu 48 saac ku bixiyo xog faahfaahsan oo ku saabsan kiiska Ikraan, hayeeshee, Fahad-ka eedeysan ayaa si buuxda u diiday amarka RW Rooble, wuxuuna masaaxo siyaasadeed oo cusub u abuuray MW-hore Farmaajo, kaas oo isna deg deg ah kaga hor yimid go’aankii lagu raacdeeyay Fahad Yaasiin, taas ayaa sabab u ah dhaqdhaqaaqa Badbaado Qaran.